warkii.com » Iskoorada Kumar Sanu, dhibkii qabsaday iyo markii loo doortay Versitale Singer:
Iskoorada Kumar Sanu, dhibkii qabsaday iyo markii loo doortay Versitale Singer:
Iskoorada Kumar Sanu iyo xiligu Bollywood soo galay:
1-sanadkii 1986 ayuu fanaan filimada ka heesa noqday mudo 4-sano ah fursad weyn sida Udit, Abhijeet iyo ragg kale heleen isaga masoo marin 1990 ayuuna fursad fiican helay kadib markii loo dhiibay Album-ka Aashiqui.
2-Waa fanaanka kaliya taariikhda hal maalin duubay 28-hees, Music-yaqaanada waxay ku jeclaayen inuu faham fiicna heeskana dhaqsi akhrin karo 5-daqiiqo kuma qaadan jirin fahamka heeska oodhan.
3-waa heesaagii ugu horeeyay 5-sano isku xigto (1990-1994) Filimfare Best Singer ku guulestay inkastoo Arjit Singh soo bar-bardhigay (2016-2020).
4-Kumar waxuu noqday fanaanka ugu saameeynta badnaa 10-sano ee 90-kii marka kowaad 5-sano (1990-1994) ayuu hogaanka hayey balse 5-sano kale hardan adag ayuu la galay Udit iyo Abhijeet saameeyntiisana wey taagned inkastoo Album-yada ugu weyna Udit lahaa. hadana Kumar waa ciriiray hana ilaawin Udit 5-sano dambe abaal marinada Abhijeet iyo ragg kale ayaa ciriiriyen bilawgii qarnigan marka la yimidna Lucky Ali iyo Sonu Nigham samaeeyntooda ayaa Udit hareereysay.
5-Kumar sanadkii 1993 ayaa loo aqoonsaday inuu yahay Versitale iyo heesaa Style walba u heesi karo tanina waxaa marag ma doonta u ah heeskii “Ye Kaali Kaali Aankhen” (Baazigar) inuu kusoo bandhigay qaab cusub. Heeskan waxaa Music-da iska leh Anu Malik oo ah Music yaqaan qaab reer galbeed shabahdo udhiga Music-da hadaba heeskaas Kumar waxuu lasoo baxay Westren Style.
Kumar heeskan Filimfare Best Singer Award ayaa lagu siiyay waxuuna garaacay Udit oo watay heeskii “Jaado Teri Nazar” (Darr).
6-Kumar hadalkiisa saxaafada qaab kibir ah u qortay isagana uusan beenin ayaa kalifay in Udit Albums qaali ah la wareego, Waxaa la sheegay inuu ku dhawaaqay inuusan aqbali doonin abaal marin dambe markuu 5-jeer ku guulestay waxuuna tilmaamay fanaaniinta kale in la gudoonsiiyo saxaafadana wey sii buun buunisay oo waxay ka dhigeen in Kumar gabi ahaan abaal marinada diiday isagana si kale ayuu hadalka u yiri. Sido kale YRFs wey isku dhaceen markuu duubay albumkii DDLJ mushaarka heeska Tujhe Dekha Toyi Jana Sanam ayuu buuq ka bilawday YRFs Albums badan oo Kumar u sameeyn lahaa Udit ayee ku wareejiyeen.
Filimfare iyagana 3-abaal marin ayee si kutalo gal udhaafiyeen Kumar hadalkiisa oo khalad loo fahmay lagana dhigay inuu abaal marin diiday waxaana ka faaidesten Udit iyo Abhijeet abaal marin ahaan iyo Album ahaan sare ayeena uso kaceen.
7-Kumar wixii ka dambeeyay 1999 murug ayuu la kulmay markuu dareemay hoos udhac xitaa codkiisa wuu isbedelay waxaa la sheegaa bilawgii qarnigan heesaha Kumar ku luuqeyay inee cod ahaan xumaayen balse markuu is daaweyay 2005 iyo wixii ka dambeeyayna heesay inuu codkiisa 90-kii mid u yaro dhow la yimid balse waa xili calankiisa dhacay.
8-Kumar waxuu kasoo muuqday LOG-da YRFs isagoo bedelay boqoradii codka Lata waana xili ay heshiyeen isaga iyo shirkada mana aysan xaqirin Kumar shirkadaan waxayna u aqoonsadeen heesaagii ugu fiicna 90-maadkii.
9-Gunaanud: Kumar 5-sano kaligiis ayaa hogaanka fanka hindiya dhanka heesaha soo hayey 5-sano kale waxaa isku heesteen Udit, Abhijeet iyo Kumar oo saameyntiisa taagned balse 10-sano isaga saameeynta guud la siiyaa waxaass run ah in Udit big Albums lahaa.
10-Kumar iyo Udit waa labo halyeey oo maqaam sare wada gaareen isku qaanadna kujiraan waqtigaan lkn xaqiiqda mid walba in la sheego waa lama huraan markaan oo kale.
Next Udit Narayan lasoco iyo iskooradiisa ugaarka ah isagana.